सरकारसँगको सहमतिमाथि छलछाम भए कडा विरोधमा उत्रिने डा.गोविन्द केसीको चेतावनी
काठमाडौँ। डा.गोविन्द केसीले सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमाथि छलछाम भए कडा विरोधमा उत्रिने बताएका छन् । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सहमति भएका बुँदाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका
डा. गोविन्द केसी आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुदै
काठमाडौँ। वरिष्ठ डा. गोविन्द केसी ६ दिन लामो आइसीयुको बसाई र १३ दिनको अस्पताल बसाई पश्चात् आज अस्पतालबाट डिसार्ज हुने भएका छन् ।
गत साउन १० गते अनसन गरेको २७औ दिन
डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति सदनमा टेबुल
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको मागपछि सरकार र प्रा डा गोविन्द केसीबीच भएको नौबुँदे सहमति सदनमा टेबुल गरिएको छ । आजको बैठकको शुरुमै काँग्रेसका सांसदले आसनबाट उभिएर